iwu nzuzo - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ weebụ, NYECountdown, llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), na-anakọta ozi na-akọwaghị ụdị nke ihe nchọgharị weebụ na sava na-eme ka dịnụ, dị ka ụdị nchọgharị, nhọrọ asụsụ, ebe ị na-ezo aka, na ụbọchị na oge nke onye ọbịa ọ bụla rịọrọ. NYECOUNTDOWN, Ụlọ ọrụ LLC na-achịkọta ozi na-akọwaghị n'onwe ya bụ iji ghọtakwuo otú ndị ọbịa NYECOUNTDOWN, LLC si eji ebe nrụọrụ weebụ ya. Site n'oge ruo n'oge, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịhapụ ozi na-akọwaghị onwe ya na nchịkọta, dịka, site na ibipụta akụkọ banyere ọnọdụ na ojiji nke ebe nrụọrụ weebụ ya. NYECOUNTDOWN, LLC nakọtara nwere ike ịchọta ozi dịka Intanet Protocol (IP) maka abanye na ndị ọrụ na maka ndị ọrụ na-ahapụ ihe na mkpado na WordPress.com. NYECOUNTDOWN, LLC naanị gosipụtara onye njirimara na adreesị IP na adreesị n'okpuru otu ọnọdụ ahụ ọ na-eji ma gosipụta ozi nkeonwe dịka akọwara n'okpuru, ma ọ bụrụ na a na-ahụ adreesị IP na adreesị email na ndị na-elekọta blog ebe ekwuru okwu.
Ndị ọbịa ụfọdụ na weebụsaịtị NYECOUNTDOWN, LLC na-ahọrọ imekọrịta na NYECOUNTDOWN, LLC n'ụzọ dị mkpa maka NYECOUNTDOWN, LLC iji chịkọta ozi gbasara onwe onye. Ego na ụdị ozi NYECOUNTDOWN, LLC na-agbakọta na-adabere n'ụdị mmekọrịta ahụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịmekọrịta na NYECOUNTDOWN, LLC na-arịọ ka ha nyekwuo ozi, gụnyere dị ka ihe dị mkpa maka ozi gbasara onwe gị na ego ị chọrọ iji hazie ọrụ ndị ahụ. N'okwu nke ọ bụla, NYECOUNTDOWN, LLC na-anakọta ozi dị otú ahụ naanị dị ka ọ dị mkpa ma ọ bụ kwesịrị ekwesị iji mezuo nzube nke onye ọbịa ahụ na mmekọrịta NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị egosipụta ozi gbasara onwe onye ọzọ karịa dịka akọwapụtara n'okpuru. Ndị ọbịa na-enwe ike ịjụ ịnye ozi gbasara onwe ha, ya na caveat na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ọrụ ndị metụtara weebụsaịtị. N'ihe nyere aka na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị ọrụ, ozi ndị mmadụ nwere ike ịhụ anya na mpụga obodo gị, gụnyere ndị nọ ná mba ndị iwu na iwu nke onwe gị na-emezighị ka ị hụ na nchekwa dị mma maka ozi dị otú ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị ma esemokwu Nzuzo a na iwu obodo dị, ịkwesịrị ịnyefe ozi gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'ime European Union, ị kwesịrị ịdebe na a ga-ebuga ozi gị na United States, nke European Union na-ewere na ha enweghị nchekwa data. Ka o sina dị, dịka iwu obodo si arụ ọrụ na 95 / 46 / EC nke 24 October 1995 ("Nzube Nzuzo EU") na nchekwa nke ndị mmadụ n'otu n'otu gbasara nhazi data nkeonwe nakwa na nnwere onwe nke data dị otú ahụ, ndị mmadụ emi odude ke obio emi odude ke United States of America emi ẹsịnde ndutịghe owo ke ntre ẹnyịme ke ofụri ofụri utọ utọ emi nte ẹkenọde ke N̄kpọ N̄kpọ emi ye ke nditiene enye ye / ma ọ bụ nchekwa ke United States of America.
Ndị Ndenye Akaụntụ
A na-agba ndị na-edebanye aha ha ume, ma ọ bụghị achọrọ, ịbanye ozi gbasara onwe ha, nke a ga-egosipụta na akaụntụ ha. Ugbu a, naanị anyị ga-egosipụta n'ime netwọk anyị Subscriber, "aha njirimara" gị na obodo ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ka ị nweta ozi ọnọdụ gị, abanyela ya mgbe ị mejupụtara ụdị ozi ịdenye aha gị.
NYECOUNTDOWN, LLC na-agbachitere ichebe ụmụaka nzuzo, karịsịa ndị n'okpuru 13. Dị ka NYECOUNTDOWN, LLC na-agba ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha soro nwa ha ma ọ bụ ụmụ ha na-achọgharị na ntanetị n'ịntanetị. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị echefu ihe ọmụma site n'aka ụmụaka. Ọzọkwa, NYECOUNTDOWN, LLC anaghị edozi saịtị ya maka ụmụaka.
Njikọ na saịtị ndị na-abụghị ndị ọrụ
Na saịtị ahụ nwere ike ịgụnye njikọ na weebụsaịtị ma ọ bụ ọnọdụ ndị NYECOUNTDOWN, LLC ma ọ bụ ndị mmekọ ha nwere, nke ndị ọzọ na-ejikwa ọrụ ndị ọzọ. Njikọ ndị a bụ naanị maka ọdịmma gị. Anyị enyochaghị ozi ahụ na saịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị ọrụ maka ọdịnaya nke saịtị ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla a ga-enye site na saịtị ndị ọzọ. Ya mere, ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eji weebụsaịtị ndị ọzọ, dịka ị na-eme ya na ihe ize ndụ gị. NYECOUNTDOWN, LLC na-agba gị ume ịtụle iwu nzuzo nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla tupu ị nyefe ozi nkeonwe.
NYECOUNTDOWN, LLC na-eji PayPal, Inc. dị ka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ọrụ nke atọ. NYECOUNTDOWN, LLC anaghị echekwa oge ọ bụla, ozi ọ bụla kaadị ịzụta ma ọ bụ debe ndenye aha ya na Ọrụ ya. Dị ka ndị dị otú a, NYECOUNTDOWN, LLC kwụsịrị ọrụ nile maka ozi ego.
NYECOUNTDOWN, LLC na-eji Google Analytics iji nweta ozi ezoro ezo site na njikwa ọrụ ya ma nwee ike nakọta ọnụ ọgụgụ banyere omume nke ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ya. NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike igosipụta ozi a n'ihu ọha ma ọ bụ nye ya ndị ọzọ. Otú ọ dị, NYECOUNTDOWN, LLC anaghị egosi ozi ndị ọzọ n'onwe ha karịa nke akọwapụtara n'okpuru.
NYECOUNTDOWN, LLC na-egosipụta na ị nwere ike ịkọwapụta onwe onye na-akọwapụta naanị ozi ya na ndị ọrụ ya, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị mmekọ nwere mmekọ na:
• Kwesịrị ịmara ozi ahụ iji dezie ya na NYECOUNTDOWN, LLC ma ọ bụ inye ọrụ dị na ebe nrụọrụ weebụ NYECOUNTDOWN, LLC, na
• ndị kwetara ịghara igosipụta ya na ndị ọzọ.
Ụfọdụ ndị ọrụ ahụ, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị mmekọ nwere mmekọ nwere ike ịnọ na mpụga obodo gị; site na weebụsaịtị NYECOUNTDOWN, LLC, ị kwenyere ịnyefe ha ozi dị otú ahụ. NYECOUNTDOWN, LLC agaghị agbazite ma ọ bụ ree ozi onye ọ bụla nwere ike ịchọta ma gosipụta onwe ya. Ndị ọzọ karịa ndị ọrụ ya, ndị ọrụ nkwekọrịta na ndị ọrụ mmekọ, dị ka akọwapụtara n'elu, NYECOUNTDOWN, LLC na-egosiputa nwere ike ịchọta na akọwapụta onwe onye naanị na nzaghachi na ntinye akwụkwọ, iwu ikpe ụlọikpe ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ nke ọchịchị, ma ọ bụ mgbe NYECOUNTDOWN, LLC kwenyere na ọ dị mma okwukwe na nkwupụta dị ezigbo mkpa iji chebe ihe onwunwe ma ọ bụ ikike nke NYECOUNTDOWN, LLC, ndị ọzọ ma ọ bụ ọha na eze. Ọ bụrụ na ị bụ onye edere edebanye aha nke ụlọ ọrụ NYECOUNTDOWN, LLC ma nye gị adreesị ozi-e gị, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike iziga gị email mgbe ụfọdụ iji kọọrọ gị gbasara atụmatụ ọhụrụ, rịọ gị nzaghachi, ma ọ bụ dị na-eme ka gị na ihe na-aga n'ihu na NYECOUNTDOWN, LLC na ngwaahịa anyị. Anyị bu ụzọ jiri blọọgụ dị iche iche na-ekwupụta ụdị ozi a, ya mere, anyị na-atụ anya na ị ga-edebe ụdị ozi email a. Ọ bụrụ na i zigara anyị arịrịọ (dịka ọmụmaatụ site na ozi nkwado ma ọ bụ site na otu n'ime usoro nzaghachi anyị), anyị debere ikike iji bipụtara ya iji nyere anyị aka ịkọwa ma ọ bụ zaghachi na arịrịọ gị ma ọ bụ nyere anyị aka ịkwado ndị ọrụ ndị ọzọ. NYECOUNTDOWN, LLC na-ewe ihe niile dị mkpa iji chebe megide ohere, ojiji, mgbanwe ma ọ bụ mbibi nke ozi nwere ike ịchọta onwe onye na nke onwe ya.
Kuki na Ekpochila arịrịọ
Kuki bụ ihe ọmụma nke na-echekwa na ebe nrụọrụ weebụ dị na kọmputa nke onye ọbịa, na na onye nleta onye nleta na-enye weebụsaịtị mgbe ọ bụla onye nleta ahụ laghachiri. NYECOUNTDOWN, LLC na-eji kuki enyere NYECOUNTDOWN, LLC chọpụta ma soro ndị nleta, ha eji ụlọ ọrụ NYECOUNTDOWN, LLC, na mmasị weebụsaịtị ha. NYECOUNTDOWN, Ụlọ ọrụ ndị nlekọta na-achọghị ka kuki etinye na kọmpụta ha kwesịrị itinye ihe nchọgharị ha iji jụ kuki tupu ha ejiri weebụsaịtị NYECOUNTDOWN, LLC, na nzaghachi na ụfọdụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma n'enweghị enyemaka nke kuki. NYECOUNTDOWN, LLC ga - asọpụrụ ma ọ bụghị tract arịrịọ.
Ọ bụrụ na NYECOUNTDOWN, LLC, ma ọ bụ ihe niile nke akụ ya, nwetara, ma ọ bụ n'ihe omume a na-atụghị anya ya bụ na NYECOUNTDOWN, LLC na-apụ n'ahịa ma ọ bụ banye n'ụgwọ akụ, ozi onye ọrụ ga-abụ otu n'ime akụ ndị a na-ebufe ma ọ bụ nweta nke ndị ọzọ. Ị kwetara na nnyefe dị otú ahụ nwere ike ime, nakwa na onye ọ bụla nwetara nke NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịnọgide na-eji ozi gbasara gị dị ka akọwapụtara na iwu a.
Mgbasa ozi nke na-egosi na weebụsaịtị ọ bụla nwere ike ịnye ndị ọrụ site n'aka ndị mmekọ mgbasa ozi, ndị nwere ike ịtọ kuki. Kuki ndị a na-ekwe ka nkesa mgbasa ozi mara kọmputa gị oge ọ bụla ha zipụrụ gị mgbasa ozi n'ịntanetị iji chịkọta ozi gbasara gị ma ọ bụ ndị ọzọ na-eji kọmputa gị. Ozi a na-enye netwọk mgbasa ozi, n'etiti ihe ndị ọzọ, nyefee mgbasa ozi ezubere iche ha kwenyere na ọ ga-amasị gị. Nzuzo Nzuzo a na-ekpuchi kuki nke NYECOUNTDOWN, LLC ma ghara ekpuchi ojiji nke kuki site na ndị mgbasa ozi ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịnye gị ozi akwụkwọ akụkọ kọmputa, ọkwa, ederede (sms) ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ soro gị kwurịta okwu site na usoro nhazi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịghara ịnweta ihe ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta niile a, ị nwere ike ịpụ site n'ịgbaso ntuziaka ndị dị na akwụkwọ akụkọ kọmputa na ọkwa, ma ọ bụ emailing support@nyecountdown.com na-egosi ọchịchọ ịwepụ na ndepụta ma ọ bụ wepụ data gị site n'aka ọrụ NYECOUNTDOWN, LLC. Ntinye ederede (sms), weghachite "REMOVE".
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbanwe nwere ike ịbụ obere, NYECOUNTDOWN, LLC nwere ike ịgbanwe ya Nzuzo Nzuzo site n'oge ruo n'oge, na NYECOUNTDOWN, LLC naanị uche. NYECOUNTDOWN, LLC na-agba ndị ọbịa ume ileba anya na ibe a maka mgbanwe ọ bụla na Nzuzo Nzuzo ya. Ịnọgide na-eji saịtị a mgbe ọ bụla mgbanwe ọ bụla na Nzuzo Nzuzo a ga-abụ nkwenye gị maka ngbanwe dị otú ahụ.
Nkwenye na njedebe nke ibu
Usoro iwu nzuzo a ga-achịkwa otu nkwekọrịta na njedebe na ụgwọ dịka a chọtara na NYECOUNTDOWN, LLC nke Usoro nke iji mee ihe dịka ha dị na ya nakwa na iwu nke iwu kwadoro.
Iwu Na-achịkwa na Nanị Azụmahịa
Usoro iwu nzuzo a ga-achịkwa otu Iwu Iwu ahụ na Nanị Ụlọ Ọrụ dị na NYECOUNTDOWN, LLC nke Usoro Njikere dịka okwu ndị ahụ dị na ya nakwa na nha dịka iwu kwadoro.